माल्दिभ्समा मदिरा .. माल्दिभ्स
माल्दिभ्समा रक्सी सुरक्षा
जहाँ माल्दिभ्समा मदिरा किन्न कहाँ
माल्दिभ्समा मादक पेय पदार्थहरूको लागत
होटलहरू जुन मदिरा जसमा
नम्बरहरूको स्थान वर्गीकरण
माल्दिभ्स - माल्डिंग्स - एड्डेन्टमा जोडीका लागि एक हजार सय सय सय नब्बी दुई टापुहरूबाट। केवल यो इडिलल तस्वीर कल्पना गर्नुहोस्: सूर्यास्त सूर्य अजुर पानीमा खस्किन्छ र तिनीहरूलाई गुलाबी रंगको रंगमा दाग लाग्छ, हिउँ-सेतो नरम बालुवामा बलात्कार हुन्छ, जसमा सुन्दर नवविवाहितताहरू बसिरहेका छन्। तिनीहरू बिस्तारै रातो सुख्खा दाखमद्यको बहावमा रातो दाखमद्य पिउँछन् र एक अर्काको समाजको आनन्द लिन्छन्।
सबै कुरा राम्रो छ, समुद्री किनारमा मादक पेय पदार्थ मात्र र माल्दिभ्समा अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा राज्यले कडाईका रूपमा प्रतिबन्धित तुल्याएको छ। कुरा यो हो कि यहाँ "सुक्खा कानून" सञ्चालन: माल्दिभ्समा रक्सीको प्रयोग, भण्डारण र बिक्री निषेध गरिएको छ। यस देशमा इस्लाम एक आधिकारिक धर्म हो, र मुस्लिम को मुख्य पुस्तक बताउँछ कि "रक्सी अशुद्ध र जैलोको जड हो।"
अन्य धर्म र कन्टीष्टहरूबाट विदेशीहरू के गर्ने र साँझको छेउमा आराम गर्न चाहान्छन् र उनीहरूको टापुमा पोखरीमा आराम गर्न चाहनुहुन्छ? यो निषेध धेरै बाइपास मार्गहरू छन्, जसले तपाईंलाई पर्यटक एजेन्सी एजेन्सी गोम्पेडका प्रबन्धकलाई भन्नेछ।
लेवीयमा माल्दिभ्समा कसरी त्यहाँ लैजानमा माल्डिभहरूमा रक्सी पिउन सम्भव छ, जहाँ किन्न कहाँ र कति खर्च हुन्छ - हाम्रो लेखमा।
वास्तवमा के गर्न लायक छैन, त्यसैले यो रसियाबाट वा एयरपोर्टमा कर्तव्य-नि: शुल्क स्टोरबाट मदिरा चलाउन कोसिस गर्नु हो। दुबै एयरपोर्टहरूमा मूलपाल्गो, सामान र म्यानुअल स्ट्याक यात्रुहरू आइपुगे। विशेष संदिग्ध व्यक्तित्वहरूको रातो कोरिडोरमा जान भनियो, र त्यहाँ उनीहरूले सबै कुरा राम्ररी जाँच गर्छन्।
बित्तिकै सटीक पर्यटकहरूले माल्दिभ्समा रक्सी लडाउँदैनन्! रोटी फ्लाक्स र ठूला बोतलहरू जेब र अंडरवियरमा सोडा मुनिका भाँडाहरूमा खन्याए र सुन्तलामा सिरिन्जले पम्प गरे। यी दुई प्रविधिहरू देश चट्टानहरू द्वारा लिनको लागि खुसी हुनेछन्, जुन देशले संयुक्त राज्यको बीसवासमा बेसिलो राज्यमा बेचेको मासुलाई बाइपास गरे।
तर केहि पनि काम गर्दैन - विमानहरू मा एयरपोर्टका कर्मचारीहरूले चाँडै तपाईंको तस्करी पत्ता लगाउँदछन्। बोतलहरू र अन्य उपकरणहरू विशेष भण्डारण बक्समा छोड्छन्, जब तपाईं घर फर्कनुहुन्छ तपाईं तिनीहरूलाई लिनुहुन्छ। र किन कानून भ break ्ग गर्ने कोसिस गर्छन् जब टापुहरूमा धेरै कानूनी तरीकाहरू छन् जब केहि सुदृढीय नरिवल रस पिउन।
<< p> सब भन्दा स्पष्ट स्थान जहाँ तपाईं विमानस्थलहरूमा रक्सी किन्न सक्नुहुनेछ - होटलहरूमा "सबै समावेशी" प्रणालीमा काम गर्दछ। टापु रिसोर्ट्स मा, रक्सीको प्रतिबन्ध लागू हुँदैन - पहिले उनीहरूले रक्सी कार्यान्वयनको लागि महँगो अनुमति पाउँदैनन्, र त्यसपछि सबै समयले ठूला करहरू तिर्दछ। त्यसोभए मनपर्ने पेय पदार्थहरू सायद तपाईंको कोठामा र होटल रेस्टुरेन्टमा मिर्गन हुन्छ।
टापुहरूमा जहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू जीवित हुन्छन्, रक्सीले रक्सी प्राप्त गर्दैन। तपाईं या त डु boat ्गामा रिसोर्ट पोस्ट गर्न र अन्य पर्यटकहरूसँग रेस्टुरेन्टमा जान सक्नुहुन्छ, वा कम कानुनी मार्गको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। हामी तटको छेउमा भाग्ने बारहरूबारे कुरा गरिरहेका छौं। तिनीहरूको मालिकहरूले रक्सीको सानो दायरा प्रस्ताव गर्दछ - एक प्रकारको बियर, वीडका, वाइन र ब्रान्डी। औपचारिक रूपमा तैरिरहेको डु boat ्गा - विमान होइन, यति तस्करहरूको भाग र कानूनको पालना गर्दैन।
ह्युल्ल टापु होटेलमा होटलमा होटलको हिलुल टापुमा पनि मदिरा बेचिन्छ। तसर्थ, माल्दिभ्सको शक्ति धनी पर्यटकहरूमा टापुहरूप्रति नकारात्मक दृष्टिकोणको सम्भावना बेइमान गर्न कोशिस गर्दैछ जो कडा पेय पदार्थले आराम गर्ने बानी छ। राज्य अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योगमा राखिएको छ - यात्रुहरूलाई ग्यास्ट्रोनोमिक प्रतिबन्धको कारणले उडान गर्न रोक्न असम्भव छ।
र माल्दिभ्समा होटलहरूमा र आधिकारिक बारहरू र रक्सीको लागत धेरै उच्च छ। मूल्य पाँच डलर भन्दा कम डलर भन्दा कम र दुई सय पचास डलर जीनाको प्रति बोतल एलिट पेयहरू भारतबाट भारत र श्रीलंकाबाट लिइन्छ, जहाँ तिनीहरू, फलस्वरूप संसारमा आउँछन्।
ब्रिज, बेच्नुहोस् र होटेल विदेशीहरू पनि, माल्दिभ्सका बासिन्दाहरूले उनलाई सम्पर्क गर्न धर्म र कानूनलाई रोक्न लगाए।
माल्दिभ्समा धेरै होटल, रेस्टुरेन्टहरू र बारहरू देशको सर्वश्रेष्ठ मानिन्छन्। यो सूर्य Siyam Iiyam, kaochandu टापु रिसोर्ट र स्पा माडी मा kaocuma बार कोल माल्डिभ्स को एक बुलबुले मा बुलबुले बार को बार एक र दाँत माल्दिभमा rewhi तह एक मात्र गाँट मादीवना मा एक मात्र गाँट माली।
कार्यक्रममा काम गर्ने, कार्यक्रममा काम गर्दै र रक्सीको मदिरा कार्यान्वयन गर्ने पर्यटक एजेन्सीहरूले तपाईंलाई फोन +7 (4534--35 ---) प्रदान गर्नेछन् संख्या + 66 6565) द्वारा which 335-77--3731 म्यानेजरले विमानस्थलमा छुट्टीहरूमा छुट्टीको बारेमा तपाईंलाई विस्तृत रूपमा परामर्श लिनेछ, जलवायु, सम्भावित आवास विकल्पहरूको विशेषताहरूको बारेमा बताउँदछ र तपाईंको सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछ।
माथि लेखिएको रूपमा, टापुहरूमा फरक क्षेत्र छ। यदि तपाईं बन्द ठाउँहरूमा लज्जित हुनुहुन्न भने, तपाईं साना टापुहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यी मध्ये एक एम्बुलुभुल हो (एम्बुड्यु), जुन 2800x1400 मिटर हो। यदि तपाईंको योजनाले हिंड्न, साँझको होटेलको एक जोडी सीमित गर्दछ, र त्यसपछि बान (Gan) जस्ता टापुहरूमा ध्यान दिनुहोस्। थप रूपमा, ठूला टापुहरूमा पूर्वाधारहरूको विकास राम्रो हुन्छ।
<< p> poxes एक टापुमा एक होटेलको सिद्धान्तमा वितरण गरिएको छ, त्यसपछि कुनै पनि अवस्थामा एयरपोर्टको आवश्यकता छ। यहाँ, एक महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि सही ठाउँमा पुग्न कति समय खर्च हुन्छ।
केहि टापुहरू डु boat ्गामा पुग्न सकिन्छ र केहि मिनेट देखि केही घण्टा देखि केही घण्टा सम्म खर्च गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं समुद्री यात्राको फ्यान हुनुहुन्न भने र यस्तो पौडी खेल्ने बारेमा सोच्नुहोस्, त्यसपछि एयरपोर्टबाट बढी रमाइलो होटलहरू छनौट गर्नुहोस्। यदि लागत तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण छैन भने, तपाईं एक शटरको रूपमा एक saaapane छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, उदाहरणका लागि, एउटै कुरा हुनु अघि। एयरपोर्टबाट gan गर्न आवश्यक छ लगभग 550500 किलोमिटर को दूरी पार गर्न आवश्यक छ।
को स्थान वर्गीकरण:
होटेल टापुहरूमा आफ्नै वर्गीकरण हुन्छ। यदि हामी युरोपेलीसँग तुलना गर्छौं भने, जसले स्टार होटलहरू प्रदान गर्दछ: जसले यहाँ प्रस्तुत गर्दछ, तब तिनीहरू यहाँ वर्गीकृत छन्: डिलक्स, उच्च र मानक। प्राय: पर्यटकहरू, कोठा छनौट गर्दै, बंगला रुदेऊ। यहाँ तपाईं ध्यान दिन आवश्यक छ, किनकि तिनीहरू फरक छन्।
Bangalows को एक फ्लोर हुन सक्छ र अलग रहन, त्यहाँ दुई-पंक्तिपट्टि उभिन वा ब्लक-प्रकारको बंगलाहरू छन्, जसमा2वा some कोठाहरू अवस्थित छन्। त्यहाँ पानीमा बंगलहरू पनि छन्। सामान्यतया, यी सबै क्षणहरू होटेल वा टूर अपरेटरबाट जानकारीबाट बाहिर निकाल र जानकारीको स्पष्ट रूपमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ यदि तपाईं ब्याच टूर खरीद गर्ने योजना गर्नुभयो भने।
तथ्यको बाबजुद एक व्यक्ति को लागी एक व्यक्ति वर्गमा एक व्यक्ति को लागी एक व्यक्तिले सहजै आरामदायी छ भने, जो प्रायः होशियार रहन्छ जो अक्सर अक्सर छनौट गर्न आवश्यक छ। माल्दिभ्समा त्यहाँ टापुहरू छन् जहाँ तपाईं अनुभवी काम गर्न असम्भव हुनुहुन्छ।
तथ्य यो हो कि धेरै होटल मालिकहरूले यो जान्दछन् कि रूसी पर्यटकले बाँकी रक्सीलाई पातलो पार्न रुचाउँछन्, त्यसैले रसियाबाट पाहुनाहरू प्राप्त गर्दैनन्। यसको मतलब हाम्रो धेरै टापुहरू मात्र बन्द छन्।
जसले योजना बनाएका छन्, प्रत्यक्ष उडानको साथ मइवाराको लागि जाँच्नुहोस्, यस गणतन्त्रको कानूनलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। मादक पेय पदार्थहरूको बिक्री मात्र रिसोर्टमा अनुमति छ, जसले बिक्रीको बिक्रीको लागि भुक्तान गर्दछ, र त्यसपछि कर लगाउँदछ। तसर्थ, मदिरा पाउन सकिन्छ: मिनाबरमा, कोठा जहाँ उहाँ होटेलहरूका रेस्टुरेन्टहरूमा बस्नुहुन्छ, डु boat ्गाको क्रूसमा टाँसिएको जहाजहरूमा।
अपवाद केवल ह्युल्ल टापु होटेल मात्र हो, यो ह्युल्ल एयरपोर्ट टापुमा अवस्थित छ। यो गरीएको पर्यटक, प्रयोग मदिरा पेय पदार्थहरूले प्रतिबन्धको लागि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएन। आखिर, यस देशको आयको मुख्य स्रोत पर्यटन र माछा मार्ने हो।
<< p> 201 on मा, मादक पेय पदार्थहरुमा कानूनमा कुनै पनि कुरा परिवर्तन भएको छैन, ठीकबाट ड्रगबाट बाहिर निकाल्ने सामान तान्न आवश्यक छ। यस चलनहरूमा भेटिएपछि पर्यटकहरू मदिरा फिर्ता लिन्छन्, यसको लागि आदान प्रदान गर्दै टोकन र रसिद दिइनेछ। मदिराको उल्टो प्रस्थान हुनुभन्दा अघि म टोकन गर्न आदानप्रदान गर्छु।